စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၅) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on March 24, 2014 at 17:21 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း စကားလုံးတွေကို အမျိုးအစားအလိုက် အုပ်စုခွဲပေးရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံက အများအားဖြင့် လွယ်ကူလေ့ရှိတဲ့အတွက် ထိတ်လန့်မနေဘဲ ပေးထားတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
လေးထောင့်ကွက်ထဲက စကားလုံးတွေနှင့်အမျိုးအစားတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
သင်နားလည်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အမျိုးအစားအမှန်ထဲကို ရေးထည့်ပါ။
အမျိုးအစားတစ်ခုမှာ စကားလုံး ဘယ်နှစ်လုံး ပါသလဲဆိုတာ သိပါသလား? သိတယ်ဆိုရင် စကားလုံး အရေအတွက်ကို သေသေချာချာရေပါ။
စကားလုံးတစ်လုံးလုံးကို မသိပါက ၄င်း၏ အမျိုးအစားကို မှန်းဆကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်အဖြေ မှန်ကောင်း မှန်သွားနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါ အဖြေတွေကို သေသေချာချာ ပြန်စစ်ပါ။
အံမ၀င်ဂွင်မကျသော စကားလုံး (Odd one out)
ဒီမေးခွန်းပုံစံမျိုးမှာတော့ တခြားစကားလုံး ၃-၄ လုံးနှင့် အံမ၀င်ဂွင်မကျတဲ့ စကားလုံးကို ရွေးထုတ်ပေးရမှာပါ။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ရာ အောက်ပါအကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ကွဲပြားနေတဲ့စကားလုံးကို ရွေးမထုတ်မီ စကားလုံးတွေရဲ့ ဆက်စပ်မှုကို ရှာပါ။
အုပ်စုထဲက စကားလုံးတစ်လုံးလုံးကို နားမလည်ပါက ၄င်းသည် အုပ်စုထဲရှိ တခြားစကားလုံးများနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်နားမလည်တဲ့စကားလုံး ဖြစ်နေလို့ မတူဘူးဆိုပြီး ရွေး မထုတ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆက်စပ်မှုကို အရင်ရှာပါ။
တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း သင်ရွေးထုတ်လိုက်တဲ့ စကားလုံးဟာ တခြားစကားလုံးတွေနဲ့ ခြားနားရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို မေးတတ်ပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်ကို သေသေချာချာဖတ်ပါ။
ကွဲပြားတဲ့စကားလုံးကို မရွေးချယ်တတ်ပါက မှန်းကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်အဖြေမှန်ကောင်း မှန်နိုင်ပါ တယ်။
ပြီးတဲ့အခါ အဖြေများကို သေသေချာချာ ပြန်စစ်ပါ။
စကားလုံးတည်ဆောက်ခြင်း (Word Building)
ပေးထားတဲ့ဝါကျ(သို့)စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီး ကွက်လပ်ထဲကို ထည့်ရမယ့် စကားလုံးသည် ပေးရင်းစကားလုံးရဲ့ သဏ္ဍာန်များကို ပြောင်းလဲပြီး ထည့်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ- The -------- was very nervous . (sing)
၀ါကျကို ပြည့်စုံသွားအောင် 'singer' ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ထည့်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးရင်း sing ကို ကြိယာမှ 'singer' ဆိုတဲ့ noun သို့ သဏ္ဍာန်ပြောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို ကောင်းစွာ ဖြေနိုင်ရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များကို လိုက်နာကြည့်ပါ။
သင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းပေးရမယ့် စကားလုံးကို ကြည့်ပါ။ ၄င်းနှင့်တစ်အုပ်စုတည်းရှိ တခြား ဘယ်စကားလုံး တွေကို သင်သိထားပါသလဲ?
စကားလုံးရဲ့ အစဟာ တသမတ်တည်းရှိနေပြီး စကားလုံးရဲ့ အနောက်ကသာ ပြောင်းလဲ လေ့ရှိပါ တယ်။
စကားလုံးအသစ်ဟာ ဘယ်အချိုးအစားဖြစ်ပါသလဲ? Verb လား?၊ Noun လား?၊ Adjective လား?၊ adverb လား? ဆိုတာကို ခွဲခြားနိုင်ရပါမယ်။
နာမ်(nouns)တွေဟာ -ment,-ion,-ness,-ity အစရှိသော စကားလုံးများဖြင့် အဆုံးသတ် လေ့ရှိပါတယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သက်ဆိုင်သော နာမ်တွေကတော့ -er,-or,-ist,-ian တို့ဖြင့် အဆုံးသတ် တတ်ကြပါတယ်။
-able,-ible,-ive,-al,-ic,-ed,-ing တို့ကတော့ အသုံးများတဲ့ နာမ၀ိသေသနတွေရဲ့ အဆုံးသတ် စကားလုံးများ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ သော ကြိယာတွေကတော့ -ise, -ate, -en တို့နဲ့ အဆုံးသတ်ကြပါတယ်။
ကြိယာထောက်အများစုကတော့ -ly ဖြင့် အဆုံးသတ်တတ်ကြပါတယ်။
ဝေါဟာရတွေကို မှတ်တမ်းတင်ရင် စကားလုံးအုပ်စုအလိုက် ဇယားဆွဲပါ။
သဏ္ဍာန်ပြောင်းလိုက်တဲ့ စကားလုံးကို မသိရင် မှန်းကြည့်ပါ။ မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပါတယ်။
ဖြေဆိုပြီးတဲ့အခါ သေသေချာချာ ပြန်စစ်ပါ။
စကားလုံးတွဲများ (Words that go together)
ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံမျိုးမှာတော့ လိုက်ဖက်တဲ့စကားလုံး (၂)လုံးကို ယှဉ်တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်များကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
ဝေါဟာရအုပ်စု(၂)ခု ပေးထားပါက တစ်ခုက စကားလုံးတစ်လုံးကို ၄င်းနှင့်လိုက်ဖက်သော စကားလုံး တစ်လုံးကို အခြား အုပ်စုမှ ရွေးထုတ်ပြီး ယှဉ်တွဲပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခါတရံ ကျတော့ လိုက်ဖက်တဲ့ စကားလုံးအတွဲတွေ (collocations)ကို ဖွဲ့စည်းပေးရပါတယ်။ ဥပမာ- ကြိယာ(verb)+နာမ်(noun): - make + friends,do+your homework)
တခါတရံကျတော့လည်း နာမ်ပေါင်းစပ်ပုဒ်များ(compound nouns)အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးရပါတယ်။ ဥပမာ- snow+boarding , wind+ surfing,mountain+ biking
တခါတရံကျပြန်တော့လည်း ကြိယာ(verb)(သို့) နာမ၀ိသေသန(adjective)ကို ၀ိဘတ် (preposition) နှင့် တွဲပေးရပါတယ်။ ဥပမာ- listen+to, look + at, agree + with, good + at , interested + in.
သင်သိပြီးသား လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စကားလုံးတွေကို စရွေးပါ။
ဘယ်စလုံးတွေကို တွဲရမလဲဆိုတာကို မသိပါက မှန်းကြည့်ပါ။ မှန်ကောင်းမှန်သွားနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးတွဲပြီးပါက သေသေချာချာ ပြန်စစ်ဆေးပါ။